भूकम्प के हो ? what is Earthquake ? | Nepal's Best Travel Guide
April 30, 2015 Nepal No comments
भूकम्प के हो ? what is Earthquake ?
भूकम्प पृथ्वीमा लगातार भइरहने नियमित प्रक्रिया वा दैवी विपत्ति हो । पृथ्वीमा ७ वटा मुख्य प्लेट हुन्छन् । सातैवटा प्लेट स“गै हिंडिरहेका हुन्छन् । जब तिनीहरू एक–आपसमा ठोक्किन्छन् तब भूकम्प जान्छ । यो ३ थरीको हुन्छ । पृथ्वीको सतहभन्दा ३० किमिमाथिको दूरीबाट आउनेलाई स्यालो, ३० देखि ७० किमिसम्मकोलाई मिडियम र ३० देखि ३ सय किमिसम्मकोलाई डिप भनिन्छ ।
बढी क्षति गर्ने ३० किमिसम्मकोले हो । नेपालमा १२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्प स्यालो हो । भूकम्प जति माथिबाट आयो, त्यसले त्यति नै बढी असर गर्छ । भूकम्पको दुईवटा वेभ हुन्छ । एउटा बडी वेभ र अर्को सर्फिस वेभ । बडी वेभमा प्राइमरी र सेकेन्डरी तथा सर्फिस वेभमा रेली र लव भन्ने २ फरकफरक प्रकार हुन्छ । बडी वेभले कम र सर्फिसले बढी क्षति गर्छ । सिद्धान्ततः भूकम्प होरिजेन्टल र भर्टिकल वेमा जान्छ । तर, कहिलेकाही“ दुवै मिलेर आइदियो भने खतरनाक हुन्छ, नेपालमा अहिले भएको त्यही हो ।
भूकम्प दैनिकजसो गइरहेको हुन्छ । तर, हामीले पत्तो पाउ“दैनौं । १ देखि ४ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्पले क्षति गर्दैन । ५ रेक्टर स्केलभन्दा माथिको भूकम्पले माग क्षति हुन्छ । सामान्य भूकम्पको मापन गरि“दैन । भूकम्प दुई तरिकाले मापन हुन्छ, त्यो हो रेक्टर स्केल र अर्को इन्टेन्सिटी ।
स्केलको विकास भइसकेपछि इन्टेन्सिटीको प्रयोग कम हुन थालेको छ । स्केलले भूकम्पको क्षमता नाप्छ । इन्टेन्सिटीले क्षतिको मापन गरेर मात्र कत्रो भूकम्प आएको हो भन्ने अनुमान गर्छ । यो धेरै आधिकारिक र विश्वसनीय हु“दैन । रेक्टर स्केलमा ० देखि १० सम्मको भूकम्पको मात्र मापन हुन्छ ।
हालसम्म संसारमा सर्वाधक ९.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । चिलीमा गएको विनाशकारी भूकम्प नै अहिलेसम्मको ठूलो हो । यस्तै इन्डोनेसियामा ९.३ र जापानमा सन् २०११ मा ९.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपालमा विक्रम संवत् १९९० मा ८.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपालको इतिहास हेर्दा हरेक ८० देखि १ सय वर्षमा ठूलो भूकम्प आउने गरेको छ । ९० सालपछि अहिलेको भूकम्प सबैभन्दा ठूलो हो । यसलाई रिटर्न पिरियड भनिन्छ ।